NgoLwesithathu, ngoFebruwari 16, 2022 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 16, 2022 Douglas Karr
Ehlabathini lokukhangela injini yokukhangela (SEO), kuphela ngabo baye baphumelela ngokwenene banokunika ukukhanya malunga nokuba yintoni efunekayo ukukhulisa iwebhusayithi yakho kumashumi amawaka eendwendwe ngenyanga. Obu bungqina bengqikelelo bobona bungqina bunamandla bobuchule bophawu bokusebenzisa amaqhinga asebenzayo kunye nokuvelisa umxholo ongaqhelekanga oya kuluhlu. Ngeengcali ezininzi ezizichazayo ze-SEO, besifuna ukuqulunqa uluhlu lwezona zicwangciso zinamandla
Kudala ndisebenzela abathengi ababini kwimimandla emibini eyenza inkonzo yasekhaya efanayo. Umxhasi A lishishini elimiselweyo elineminyaka engama-40 yamava kummandla wabo. Umxhasi B mtsha malunga neminyaka engama-20 yamava. Sigqibe ukuphumeza indawo entsha ngokupheleleyo emva kokufumanisa umxhasi ngamnye ofumene iindlela zokukhangela ezikhathazayo ezivela kwiiarhente zabo: Uphononongo-Ii-arhente zipapashe amakhulu abantu.